Tenga Dzikisa Kuzvimba & Kuzvimbirwa, Kupisa Kwemafuta Kunoonda Tea Detox | WoopShop®
Zita reBrand: GPGP Green vanhu
NET WT: 7/14/28 mabhegi madiki eti
Muenzaniso Nhamba: Tea-HFU-detox04
Chinhu Rudzi: Slimming Detox Tea
Sirifu upenyu: 2 makore
Kubudirira: Kuderedza dumbu guru, chenesa marara emudumbu, bvisa huturu, kupisa mafuta, uye kuderedza uremu.
Shandisa nzira yekugadzira tii kuti uchengetedze kudya kwemuti wetii zvakanyanya sezvinobvira, kuitira kuti pasave nekudya kunorasika, uye inonaka uye ine utano panguva imwe chete.
Iyi slimming tii inogona kukubatsira kudzinga madhipoziti mumuviri wako, kukurudzira metabolism uye kupisa mafuta, nekudaro ichikubatsira kuzadzisa zvinangwa zvako zvekuonda. Panguva imwecheteyo, inogonawo kubatsira muviri wedu kubvisa huturu, kubvisa kushushikana kwemuviri, uye kubatsira kurara.
Iyi detox tii inoshandisa yakazvimiririra kurongedza, kaviri-layer vacuum yekuvhara, uye yakakwirira permeability mabhegi.
Isa 1-2 tea mabhegi mukapu.
Dururira mumvura yakachena inopisa uye rega tii imire kwemaminitsi 3-5.
Inwa mabhegi etii 1-2 nguva yega yega, kaviri pazuva, mushure mekudya mangwanani uye usati warara usiku.
Iyi slimming tii yakakodzera kushandiswa kwemangwanani nemanheru, ine diki teabag mazuva ese.
Kwete kukurudzirwa kuvakadzi vane pamuviri
Kutenda kune woopshop, kumhanya kwekutumira kunoedzwa uye kuisa manotsi gare gare